ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ပညာပေးမှုကြောင့် ဂျက်မားနှင့် အာလီဘာဘာ သတိထားရမယ့်အချိန် ရောက်နေ – White Sone
ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ပညာပေးမှုကြောင့် ဂျက်မားနှင့် အာလီဘာဘာ သတိထားရမယ့်အချိန် ရောက်နေ
by HN M
ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ ပညာပေးမှုကြောင့် ဂျက်မားနှင့် အာလီဘာဘာ သတိထားရမယ့်အချိန် ရောက်နေ..
ရှန်ဟိုင်းဖိုရမ်တခုမှာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ စည်းမျဥ်းကန့်သတ်ချက်တွေနှင့် စီးပွားရေးပေါ်လစီတို့ကို ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့မှုကြောင့် တရုတ်အာဏာပိုင်တွေနှင့် ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှု ရှိခဲ့ပြီးနောက် လူမြင်ကွင်းကနေ၊ ဂျက်မားဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကတည်းက ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ ပြီးနောက် တနေ့ကတော့ လူမြင်ကွင်းမှာ ကိုယ်လုံးပြပြန်ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
ဂျက်မားဟာ တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး အာလီဘာဘာနှင့် Ant Group တို့ကို ဦးစီးတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှာ အချမ်းသာဆုံးဘီလျံနာ တဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။
တနေ့တုန်းကတော့ ဂျက်မားဟာလူမြင်ကွင်းမှာ ပြန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် အာလီဘာဘာရှယ်ယာဈေးကလည်း အတက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ဒီကနေ့မှာတော့ အကျဘက်ပြန်သွားနေပါသည်။ လေ့လာသုံးသပ်မိသလောက်အရ ဆ်ိုရရင်တော့ တရုတ်ဗဟိုဘဏ်က များမကြာမီ anti-trust rules အသစ်တွေကို ပြဌာန်းပြီးတော့ ဂျက်မားရဲ့ လုပ်ငန်းအင်ပါယာကို နယ်ကျုံ့ပြီး အစိုးရက ထိန်းချုပ်ရလွယ်တဲ့ အထိ ချိုးနှိမ်မှုတွေ လုပ်သွားဖို့ရန် ရှိနိင်သည် လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။
Alipay Service, Tencent နှင့် WeChatpay တို့တော့ တရုတ်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ anti-trust rules တွေဖြင့်လှုပ်မရအောင် ချည်နှောင် ထိန်းချုပ်တာ ခံရတော့မည့်အနေအထားမှာ ရှိနိုင်ပါသည်။ လတ်တလောကာလတွင် တရုတ်နည်းပညာစတော့တွေဟာ ထိုဖိအားကြီးရှိနေသည့်အတွက် ဈေးနှုန်းအကျမှာ Buy on the dips လုပ်တာမျိူးကို လက်ရှောင်တာက အကောင်းဆုံးပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ (KoNayNay)
COVEX အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာပြည် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးတွေ ထပ်ရတော့မည်၊ ဝမ်းသာစရာပါပဲ
ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခဲ့ရတဲ့ ဗီယက်နမ် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ဆီးအိမ်ထဲမှ ဧရာမကျောက်တုံးကြီး
စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးသံတမန်...
သိမ်းထားတဲ့ အာဏာကို ချက်ချင်း စွန့်လွှတ်ဖို့...
အာဏာသိမ်းလုပ်ရပ် မအောင်မြင်ရန် ကုလမှ...
လူတဦးလျှင် ဒေါ်လာ (၅၅) သန်း ကုန်ကျမည့် အာကာသထဲသို့...
ငှက်ပျောတုံး ဖက်အိပ်ရတဲ့ ဘဝဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလို့...
Copyright © 2021. Created by whitesone.